Madaxweynihii Saddexaad oo soo gaaray Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxweynihii Saddexaad oo soo gaaray Muqdisho
Madaxweynihii saddexaad ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho oo lagu wado inuu dhawaan ka furmo shir madaxeed looga arrin sanayo arrimaha doorashooyinka dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ‘Madoobe’ ayaa hadda soo gaaray magaaladda Muqdisho, waxaana soo dhaweyn aad u sarreysa loogu sameeyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Axmed Madoobe, ayaa noqonaya Madaxweynihii Saddexaad ee yimaada Muqdisho, si uu uga qeyb galo shirka, waxaana ka sii horreeyay Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koofur galbeed ee shalay iyo saakay kala yimid Muqdisho.
Imaanshiyaha Caasimadda ee Axmed Madoobe ayaa ka ka dhigan in kaliya Madaxweynayasha Puntland iyo HirShabeelle ay ka maqan yihiin xubnaha muhiimka u ah shirka wada-tashiga qaran ee uu hore u iclaamiyay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xi-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni, ayaa ka maqan dalka, waxaana la filayaa inuu dhawaan soo gaaro Muqdisho, halka Madaxweynaha HiShabeelle uu ku jiro xallinta xasarado siyaasadeed oo dagaallo isku badalay oo ka dhacay magalada Jowhar.
Sida ay hore u baahisay Keydmedia Online, shirka ayaa dib uga dhici kara xilligii loo qorsheeyay oo ahayd maanta oo ku beegan May 20, 2021, waxaana la filayaa in si rasmi ah ay madaxdu isku hor fariistaan Sabtiga ama Axadda.